Sidee Mashiinnada Faafa ee Kacaanku U Kacaan-News-Yuyao Xianglong Isgaarsiinta Warshadaha Co., Ltd.
Sidee Mashiinnada Faa'iido u Faafayay
Waqtiga: 2021-03-18 Hits: 7
Sanadkii la soo dhaafey, xirfadlayaal caafimaad iyo hey'ado dowladeed waxay dadka kula taliyeen inay yareeyaan xiriirka dadka kale hadiiba ay macquul tahay. Taasi's waa mid ka mid ah sababaha ay tafaariiqleyaashu aad iyo aad u badan ay u soo bandhigayaan soo qaadis dhinacooda ah, sababta shirkadaha wax keenaya ay u bataan iyo sababta ay otomaatiyadu dib ugu soo noolaanayaan. Halkaas's sidoo kale hab kale oo ka mid ah isdhexgalka aan la xiriirin in's arkay ballaadhinta inta lagu jiro aafada - mishiinada iibinta.
Laakiin anaga'kama hadleyso kaliya mashiinadaada iibinta aasaasiga ah ee bixiya jibbaarada, baararka nacnaca iyo soodhaha. Mashiinada iibinta ee bixiya wax kasta oo ka yimaada pizzas ilaa koobabka ilaa hilibka la duudduubay. Mashiinnada wax lagu iibiyo ee Upscale ayaa halkaas ka soo goynaya's waxay ahayd abaar fursadaha cuntada, gaar ahaan boosteejooyinka gagida diyaaradaha, halkaas oo masiibada ka dhacday maqaayadaha qaar, iyadoo u noqotay suuq koraya.
Kuwa sameeya mashiinka wax lagu iibiyo ayaa tijaabinaya qaabab loo yareeyo la xiriirka dusha sare. Qaar ka mid ah, taasi waxay ka dhigan tahay sameynta mashiin lagu iibiyo taas's la jaanqaadi kara barnaamij, halkaas oo dadku ku amri karaan amarkooda. Dadka kale, waa's waxay ku lug lahayd abuuritaanka shaashad taabasho halka duljoogsigu ku filan yahay inuu muujiyo waxa qof jeclaan lahaa inuu dalbado.
Cunnadu maaha'waa waxa kaliya ee mashiinada wax lagu iibiyo ee tikniyoolajiyadda sare ay gadayaan. Xagaagii 2020, MTA wuxuu bilaabay adeegsiga mashiinnada iibinta si loogu iibiyo PPE saldhigyada dhulka hoostiisa mara. Waa'sa ballaarinta xiisaha leh ee tikniyoolajiyad duug ah - laakiin inay saameyn ku yeelan doonto adduunka tafaariiqda iyo adeegga cuntada ka dib markii aan ka soo baxno aafada waa su’aal weyn.
Suufyada aan lala xiriirin waxay u baahan yihiin App ahaan taageero taasna waxay leedahay codsi sare oo taleefanka gacanta ah. Laakiin meelahaas oo internetku uusan si fiican u dabooli karin, taabashada suufka taabashada wali waa la codsadaa sida ATM-ka.
Sidaas sida a sameeyaha suufka pin, Waxaan indhaha ku haynaa isbeddelladan si aan u hubino sida ay u socoto mustaqbalka.
Hore: Xianglong Isgaarsiinta - lamaane lama huraan u ah soo saarayaasha xarumaha is-adeegga
Xiga: Adeegso APP si aad u xaqiijiso da'da inaad biir uga iibsato mashiinnada iibinta dhammaadka-2021